Yacht lehibe indrindra eran-tany | News Travel
yacht lehibe indrindra eran-tany
Nilaza izy ireo fa efa elaela izao ny fitakiana yacht lehibe Nitombo izany ary, araka ny filazan'ny mpanamboatra sy ny mpivarotra, dia nanomboka tamin'ny taona 2019 no nitombo ara-bakiteny ny zava-drehetra satria nitombo ny isan'ny miliaridera nahatonga ny areti-mifindra. Mampalahelo ny tontolontsika, izay na dia nisy very asa aza ny sasany nahazo vola an-tapitrisany maro...
Ankehitriny ny tsena dia maniry yacht lehibe sy lehibe kokoa ary araka ny filazan'izy ireo dia vao manomboka izany. Ny mpanamboatra yacht lehibe indrindra dia ny orinasa alemà Lürssen, izay misy toeram-pivarotana valo any avaratry ny firenena eoropeanina. Ny mpamorona, ny tompony ary ny mpanao dokambarotra dia miara-miasa mba hahazoana antoka fa, amin'ny farany, ny fanirian'ireo izay mametraka ny faktiora dia ho tanteraka. anio, ny yacht lehibe indrindra eran-tany dia ilay hitanao amin'ny sary, ny Azzam. Fantatsika ve izany?
Azzam, yacht lehibe indrindra eran-tany
Ankehitriny ny yacht lehibe indrindra eto an-tany 180 metatra ny halavany, na dia amin'ny 2024 aza dia misy iray amin'ny lalana mirefy 183 metatra. Ankoatra izany, ny orinasa Alemana mpanao yacht noresahintsika teo aloha dia nilaza izany fotoana fohy monja dia lasa yacht super 200 metatra ny halavany. Izany no fironana.
Noho izany, ny Azzam no yacht lehibe indrindra amin'ny 180 metatra ny halavany. Io no yacht manokana lafo vidy indrindra hatramin'ny taona 2013 ary tamin'ny voalohany dia 35 metatra ny halavany. Ny Azzam dia naorin'i Lürssen teo ambany fitarihan'ny injeniera Mubarak Saad al Ahbadi. nanana mitentina 600 tapitrisa dolara, ho an'ny fanorenana fotsiny, ary tao anatin'ny dingana dia nitombo sy nitombo ary nitombo mandra-pahatongan'ny farany lava.
Ny yacht dia nofaina tamin'ny Aprily 2013. Namboarin'ny orinasa alemà Lürssen Yatchs, novolavolain'i Nauta Yatchs ary tamin'ny endrika anatiny nataon'i Christophe Leoni, dia naorina tao anatin'ny telo taona, fotoana firaketana an-tsoratra. Herintaona talohan'izay, tamin'ny 2012, ny Azzam dia nafindra avy amin'ny tohodranony nirefy 170 metatra tany amin'ny tohodrano lehibe 220 metatra mba hamitana ny asa. Tamin'ny faran'ny taona 2009 no nanomboka notapahina ny vy ho an'ny sambo, ary tamin'ny taona 2013 dia vita ihany ny asa.
ity yacht ity Manana toerana handraisana vahiny 36 ary mpiasa 50 farafahakeliny ary mpiasa 80 ambony indrindra.. Izy io dia manana efitrano fanofanana golf sy gym, ary ny ivelany dia kintana. Mirefy 29 metatra ny halavan’ny efitranony lehibe ary toerana malalaka mirefy 18 metatra tsy misy andry tohana, zavatra mahafinaritra. Mba hanomezana toerana ho an'ny vahiny maro misy suite 50 ary ny tokotanin-tsambo, eny, tsy manana toerana malalaka be.
Ny tsipika ivelany, ny mombamomba, dia mitondra ny sonia ny Nauta Design, studio naorin'i Mario Pedol, ary rehefa jerena avy lavitra dia toa kely kokoa noho ny jerena akaiky. Ny tombony amin'ny famolavolana tsara.
Araka ny sary nivezivezy tamin'ny sambo, dia manana deck enina ary manana ny design teknolojia hikarakarana ny tontolo iainana, miaraka amin'ny fampihenana ny gazy karbonika sy ny tabataba. Tombanana ihany koa fa ny angovo fanampiny avy amin'ny motera dia ampiasaina amin'ny rafitra desalination hanovana ny rano ho rano fisotro.
fa ny Azzam dia tsy sambo miadana, araka ny mety ho eritreretinao momba ny habeny (ilay zavatra momba ny goavambe miadana). Tsy izany no zava-misy, ny Azzam dia sambo haingana izay mety hahatratra 31 knots noho ny turbine lasantsy roa sy motera gazoala roa izay mitondra fiaramanidina efatra. Ny Azzam milanja 14 arivo taonina eo ho eo ary ny tanky misy solika dia manana fahafaha-manao solika iray tapitrisa litatra. Tombanana fa 605 tapitrisa ny fitambarany, 100 tapitrisa eo ho eo noho ny yacht fahatelo lehibe indrindra eran-tany, ho an'ny fampiasana manokana, ny fanakona-masoandro.
fa izay nanome baiko ny fanamboarana ity yacht super ity? Mazava ho azy fa Arabo manana vola be: ny Khalifa bin Zayed Al Nahyan, filohan'ny Emira Arabo Mitambatra. Voalaza fa azo hofaina amin'ny sata, fa vinavina ihany. Ary inona no dikan'ilay anarana? Tapa-kevitra.
Ataoko fa tsy dia liana loatra amin'ny vidin'ny fikojakojana an'io sambo kely io ny filohan'ny UEA, fa tena lafo tokoa. Toa ny 10%-n'ny vidiny no lany amin'ny azy fikarakarana isan-taona. Izany hoe ny sasany 60 tapitrisa dolara isan-taona.
Raha misy yacht lehibe indrindra eran-tany dia tsy maintsy misy a Yacht faharoa lehibe indrindra eran-tany… Marina izany, hamaranana ny lahatsoratra anio izay atolotro ny eclipse super yacht. ny tompony dia Roman Abramovih, Rosiana miliaridera, mpandraharaha, tompon'ny Chelsea FC an'ny Ligy Premier. Naharitra dimy taona ny fanamboarana azy ary mitentina 409 tapitrisa dolara, ka ny vidiny ankehitriny, miaraka amin’ny fanavaozana vita hatramin'izay, dia 620 tapitrisa.
Mitentina 65 tapitrisa isan-taona ny fikojakojana ity sambo ity. Ny Eclipse dia yacht mandeha amin'ny herinaratra diesel, ny moterany dia Azipod ary ny endrika anatiny dia mitondra ny sonia ny trano anglisy Terence Disdale Design, Ny tokotanin'ny tompony manokana dia 56 metatra ny halavany ary afaka handraisana vahiny 36, ao amin'ny kabine 18, miaraka amin'ny ekipa iray. 66 olona. Sambo raitra izy io, angamba kanto kokoa noho ny Azzam.
Manampy helipad telo sy dobo filomanosana mirefy 16 metatra miala sasatra eo afovoan-dranomasina izy io ary rehefa tsy misy mampiasa azy dia afenina ho lasa gorodona misy toerana handoroana afo tsara. Tsy maintsy lazaina fa tamin'ny nisehoan'ny Azzam dia nanakona ara-bakiteny ny Eclipse, saingy tsy isalasalana fa ny sambo Rosiana dia mbola yacht faran'izay ambony indrindra amin'ny yacht super.
mazava ho azy, mitohy ny lisitry ny yacht lafo vidy eto amin'izao tontolo izao. Efa voalazanay tany am-boalohany fa mihamitombo hatrany ny fitakiana ireo sambo ireo satria mitombo ny isan’ny miliaridera tsy mahalala intsony ny tokony hatao amin’ny vola be ao amin’ny kaontiny.
Ny yacht manaraka amin'ny lisitra dia ny Dilbar, an'i Alisher Asmanov, miliaridera Uzbek, 156 metatra, ny Mahrousa, 145.72 metatra, yacht filoham-pirenena Ejipta ary ny taonjato faha-XNUMX na ny Flying Fox, 136 metatra, nofain'i Beyonce sy Jay Z indray mandeha.
El Dubai, avy amin'i Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum avy any Dubai, miaraka amin'ny halavany 162 metatra, ny Nord nifidy tamin'ny 2021 koa avy amin'i Lürsse, ny Apk Mirefy 183 metatra fa tsy rendrarendra fa mbola eo am-panamboarana ny dia ary antenaina ho latsa-bato amin'ny 2024 ary farany, any Polonina ny Y910 120 metatra dia ao anatin'ny dingana famolavolana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » yacht lehibe indrindra eran-tany
Sakafo mahazatra an'i Cordoba
Tanànan'ny Moyen Âge any Espaina